WACAAL DAREY AH: Ciidamadda Ahlusunna oo ka baxay magaalada Guriceel – Radio Daljir
Oktoobar 27, 2021 8:03 b 0
Ciidanka Ahlu-sunna ayaa fariisinkii ay kulahaayeen aagga Jaamacadda kabaxay ayagoo wata Gaadiidkooda dagaalka, waxaana ay kubaxeen waddada deegaanka Gowd wiil ee dhacda dhanka Waqooyi Beri ee Guriceel.
Ururka Ahlu-sunna ayaa fariisinka ay ku lahaayeen Jaamacadda waxaa ay uga tageen labbo Gaari oo kala ah Beebe iyo Cabdi Bile oo ay lahaayeen Dowladda kuna qabsadeen dagaalkii Bohol kal hore ka dhacay.
Wararka ayaa sheegaya in Ahlu-sunna ay uga baxeen qaab Wadahadal ay gar wadeen ka ahaayeen Ganacsade Xaashi Carabey iyo Senator Cabdi Qaybdiiid.
Ciidamadda Dowladda ayaa hadda galay fariisimihii xoogganaa ee Ahlu-sunna ku lahaayeen halka loo yaqaanno Jaamacadda waxa ayna kawadaan baaritaano.
Sidee ku timid in Ahlusunna ay isaga baxaan Guriceel iyadoo saddax maalin gudaheed dhiigbadan uu ku daatay? (Waraysi)